राष्ट्र बैंकले २ अर्ब बढी बैंकहरूमा लगानी गर्दै, कहिले सम्म दिन सकिन्छ आवेदन ? – BUSINESSPANA.COM
राष्ट्र बैंकले २ अर्ब बढी बैंकहरूमा लगानी गर्दै, कहिले सम्म दिन सकिन्छ आवेदन ?
April 30, 2021 Businesspana
काठमाडौं–नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूमा २ अर्ब बढी लगानी गर्ने भएको छ । जस अन्तरगत “क” वर्गका वाणिज्य बैंकहरूलाई १ अर्ब ६० करोड १७ लाख, “ख” वर्गका विकास बैंकहरूको हकमा ३० करोड ३ लाख, “ग” वर्गका वित्त कम्पनीहरूलाई १० करोड १ लाख बराबरको रकम लगानी गर्ने भएको हो ।
केन्द्रीय बैंकले विभिन्न कोषहरूमा भएको रकम त्रैमासिक ब्याज भुक्तानी गर्ने गरी सो रकम लगानी गर्न लागेको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सम्मको ३६५ दिनको मुद्धती निक्षेपको रुपमा २०७८ जेठ २ गते देखि २०७९ जेठ १ गते सो रकम उपयोग गर्न पाउने छन् । मुद्दती निक्षेपको रुपमा लिन चाहने बैंक तथा वित्तहरुले बैंकका सर्तहरूको अधीनमा रहि आगामी बैशाख २१ गते दिनको १ बजे भित्र सिलबन्दी फारम विभागमा पेश गर्नु पर्ने छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको कम्तिमा दुई वर्ष पुरा भएको हुनुपर्ने, बैंक बाट तोकिएको न्यूनतम पूँजीकोष कायम रहेको, निष्कृय कर्जा सापटको पाँच प्रतिशत भन्दा कम भएको लगायतका शर्तहरू केन्द्रिय बैंकले राखेको छ ।
Previous: यो वर्ष आर्थिक बृद्धिदर ३.९८ प्रतिशत हुने विभागको अनुमान
Next: महामारीका बिच राजश्व सङ्कलनमा वृद्धि